सिंगो भारत यी बालकको उद्धार गर्न सक्रिय ! तर सफल होला ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
सिंगो भारत यी बालकको उद्धार गर्न सक्रिय ! तर सफल होला ?
कार्तिक ११,काठमाडौँ । भारतको तमिलनाडुको त्रिची शहरको नादुकाटपट्टी गाउँमा दुई वर्षीय सुजित विल्सन शुक्रबार साँझ घरको पछाडि बोरवेलमा एक्कासि खस्न पुगे। निकै गहिराईमा खसेका सुजितलाई बचाउन परिवारले पुलिस र दमकल विभागलाई तत्काल खबर गरे । त्यसको लगत्तै उनलाई बचाउने प्रयास साँझ छ बजेदेखि सुरु भयो ।
हातले तान्न प्रयास असफल भयो
सुजित ८८ फिटको गहिराइमा फसेका छन् । हामीले ४० फिट खनिसकेका छौ । यदि हामीले यहि गतिमा उत्खनन गरिरह्यौं भने त्यहाँ पुग्न १२ घण्टा लाग्नेछ ।’ भारतका धेरै अधिकारीहरू, राजनीतिज्ञ र सेलेब्रेटीहरूले सुजितलाई बचाउनका लागि सोशल मिडियामा प्रार्थना गरिरहेका छन् ।श्राेत onlinekendra
भारतको मन्दिरमा जंगबहादुरका पूजारी